Afqaanistaan:- Qaabkee ayay Taalibaanku dib ugu qabsadeen kala bar dalka ? | Gaaroodi News
Afqaanistaan:- Qaabkee ayay Taalibaanku dib ugu qabsadeen kala bar dalka ?
Qiyaastii 15 milyan oo qof oo ah kala bar dadka ku nool dalkaasi Afqaanistaan – ayaa lagu soo warramayaa in ay ku nool yihiin aagag ay maamusho Taalibaan ama ay si caadi ah u joogaan isla markaana ay ka geystaan weerarro ka dhan ah ciidamada dowladda.
Meelaha qaar ee ay dowladdu awood u yeelatay in ay dib u soo abaabusho ciidamadeeda ama ay soo ururiso maleeshiyaadka deegaanka, ayay dib u qabsatay deegaannadii ka baxay gacanteeda – ama dagaallo ayaa wali ka soconaya deegaannadaasi. In kasta oo ciidamadii ugu badnaa ee Mareykan ah ay dalkaasi Afqaanistaan ka baxeen bishii Juun ee sanadkan, in yar oo ka mid ah ciidamada Mareykanka ayaa ku haray caasimadda Kabul, waxaana maalmihii la soo dhaafay ciidamada cirka ee Mareykanku ay qaadayeen duqeymo dhanka cirka ah oo ka dhan ah fariisimaha mintidiinta Taalibaan.
Ciidamada dowladda Afqaanistaan ayaa inta badan gacanta ku haya magaalooyinka iyo degmooyinka ku yaal dhulka bannaan ama dooxooyinka wabiyada – meelahaasi oo ah halka ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee dadku ku nool.
Colaadda ayaa sidoo kale ku khasabtay dad badan in ay ka qaxaan guryahooda – ilaa 300,000 oo qof ayaa ku barakacay coladda tan iyo bilowgii sanadka.
Hay’adda Qaramada Midoobey u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in barakaca cusub ee ka socda gobollada Badakhshan, Kunduz, Balkh, Baghlan iyo Takhar uu imaanayo xilli Taalibaanku ay qabsanayaan dhul baaxad leh oo ku yaal dhanka miyiga.
Canshuuraha laga qaado badeecadaha wadanka ka soo galaya am aka gudbaya marinnada ay Taalibaanku xukumaan waxaa hadda uruuriya kooxda Taalibaan – inkasta oo cadadka saxda ah ee canshuurta ay qaataan aanay caddeyn maadaama ganacsigu uu hoos u dhacay sababo la xiriira dagaalka.
Hakadka ku yimid isu socodka baayacmushtariga isaga kala goosha xudduudaha ayaa saameyn weyn ku yeeshay qiimaha badeecadaha daruuriga ahi ee suuqyada yaal, gaar ahaan shidaalka iyo cuntada